मृत्यु हुनु भन्दा पहिले देखिने यी पूर्व संकेतहरु ! जो कसैलाई नि देखा पर्ना सक्छ ! – Classic Khabar
शिवपुराणमा भगवान शिवले भनेका छन् की जुन मनुष्यको शिरमा गिद्ध, काग र परेवा आएर बस्छन्, त्यो व्यक्ति एक महिना भित्र मर्नेछ । त्यस्तो शिवपुराणमा बताईएको छ । यदि अचानक कुनै व्यक्तिको शरीर सेतो या पहेंलो हुँदै गयो र रातो निशानहरु देखा पर्यो भने हामीले त्यो मानिसको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ भनेर बुझ्न सक्छौं । जुन व्यक्तिको मुख,कान,आँखा, र जिव्रोले ठिक संग काम गरेको छैन भने शिवपुराणमा भनिए अनुसार त्यो व्यक्तिको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ ।
Nextबिहेमा बिहुलीले नै बेहुलाई यस्तो गरेपछि बेहुलालाई जोगाउन हम्मे हम्मे पर्यो, जग्गेमा नै पर्यो नबदुलाह दुलहीको घम्साघम्सी ( हेर्नुहोस् भिडियो)-